စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ကဲ.....လာပါပြီ Medical Dictionary for Mobile Phone
Home eBOOK ကဲ.....လာပါပြီ Medical Dictionary for Mobile Phone
Post under eBOOK at 3/07/2011 08:05:00 PM Posted by MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
ကဲ.....လာပါပြီ Medical Dictionary for Mobile Phone.
ဒါကို တင်မယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ထားပေမယ့် အကြောင်းကြောင့် မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး..ကျနော်တို့ သူနာပြုတွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ သိချင်တာလေးတွေ လွယ်လင့်တကူ ရှာလို့ရအောင် ရည်ရွယ်တာပါ။ iPhone ကိုင်နိူင်သူတွေ အတွက်တော့ မလိုဘူးပေါ့လေ။ လက်တွေ့ ကျနော့်ရဲ့ ဖုန်း Sony Ericssonနဲ့ သုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ်...တခြားဖုန်းအမျိုးအစားတွေလဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ သူနာပြုများ အချင်းချင်း Bluetooth သို့မဟုတ် ဒီဘလော့ကို လမ်းညွန်ခြင်းဖြင့် မျှဝေပေးကြပါ။ အခကြေးငွေယူပြီး မျှဝေခြင်း မပြုဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
English-Myanmar Dictionary လိုချင်သူများ ဒီမှာ သွားရောက်ယူနိူင်ပါတယ်။ ကျနော် သုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Download မရရင် Comment ပေးခဲ့ပါ။
9 comments: on "ကဲ.....လာပါပြီ Medical Dictionary for Mobile Phone"
I downloaded to my laptop but it said no supported file to open your dictionary. So pls let me know what supported software need to download to activate your dictionary. Thankssssss..........
ဒေါင်းလို့တော့ရတယ်..ဘယ်လိုထည့်ရမှန်းမသိဘူး..အစ်မရဲ့ဖုန်းက nokia N85 ပါ
အစ်မရဲ့ ဖုန်းထဲကို ကော်ပီကူးပြီး ထည့်လိုက်ယုံပါပဲ. ဖုန်းထဲရောက်မှာ Install လုပ်ပါ.ဒါဆို သုံးလို့ရပါပြီ။
၉၀၂ မှာရော သုံးလို့မရဘူးးလား
ko kyaw htet ရေ..
ယခင်က ကျနော်လဲ Sony Ericsson မှာ ထည့်ပြီးသုံးတာပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဖုန်း ကျွန်တော်ဖုန်းက sony ericsion ပါ myanmar english dictionary ကလည်း ဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီး အင်စတော လုပ်လို့မရလို့ စိတ်ညစ်တယ် လုပ်နည်းထည့်နည်းလည်းပေးပါအုံး
nokia c2 03 မှာ စမ်းသုံးကြည့်မလို့ ဒေါင်းတာမရဘူးဗျာ
မေးလ် ထားခဲ့ပေးပါ့လား၊ မေးလ် ပို့ပေးပါ့မယ်
ကျနော် Link ကို test လုပ်ကြည့်တယ်...ဒေါင်းလို့ရတယ်.. ထပ်လုပ်ကြည့်ပါဦးး.မရ.ရင် မေးလ်ထားခဲ့ပေးပါ...